Kedu ihe adreesị IP dị na ya na Kedu ka akara IP gị si emetụta Deliverability Email gị? | Martech Zone
Mgbe á »na-abá» ‹a na-ezipu ozi á» ‹ma na launching email ahá» ‹a mkpọsa, your organisation's IP akara, ma ọ bụ Aha IP, dị ezigbo mkpa. A makwaara dị ka a ziri ozi, aha IP na-emetụta nnyefe email, nke a bụ isi maka mgbasa ozi email na-aga nke ọma, yana nkwukọrịta ọtụtụ ebe.
N'isiokwu a, anyị na-enyocha ọnụ ọgụgụ IP karịa nke ọma ma lelee otu ị ga - esi jigide aha IP siri ike.
Kedu ihe Nlekọta IP Ma ọ bụ Mmetụta IP?
IP akara bụ akara metụtara na izipu adreesị IP aha. Ọ na-enyere ndị na-ahụ maka ọrụ aka ịchọpụta ma email gị ọ na-eme ka ọ gafee spam nzacha ma ọ bụ na ọ bụghị. Ihe akara IP gị nwere ike ịgbanwe dabere na ihe dị iche iche, gụnyere mkpesa ndị nnata na oge ole ị na-ezipụ ozi ịntanetị.
Kedu ihe kpatara IP IP ji Dị Mkpa?
Nchịkọta IP siri ike pụtara na a na-ewere gị dị ka isi iyi a tụkwasịrị obi. Nke a pụtara na ozi ịntanetị gị ga-erute ndị nnabata gị ezubere na mgbasa ozi email gị wee bụrụ ohere dị ukwuu nke ịdị irè. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ndị ahịa gị na-ahụkarị ozi ịntanetị sitere na nzukọ gị na folda spam ha, ọ nwere ike ịmalite ịmalite echiche ọjọọ nke ụlọ ọrụ ahụ, nke nwere ike ịnwe mmetụta ogologo oge.
Kedụ ka Aha IP Gị Si Emetụta Nsụgharị Email?
Aha onye na-eziga IP bụ akụkụ nke usoro iji kpebie ma email ruru igbe ma ọ bụ na spam nchekwa. Aha na-adịghị mma pụtara na ozi ịntanetị gị nwere ike akara dị ka spam, ma ọ bụ ụfọdụ ụfọdụ anabatacha ya. Nke a nwere ike ibutere nzukọ ahụ ezigbo nsogbu. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ inwe ntụkwasị obi na mgbapụta nke ozi ịntanetị gị, ijigide aha onye na - ezigara gị ozi dị ezigbo mkpa.
Kedu ihe dị iche n'etiti adreesị IP raara onwe ya nye na adreesị IP nkekọrịta?
O nwere ike iju gị anya ịmata na ọtụtụ ndị na-enye ọrụ email anaghị enye a raara onwe ya nye Adreesị IP maka nke ọ bụla n'ime akaụntụ ha. Yabụ, gị na-eziga na akaụntụ bụ na-akọrọ gafee ọtụtụ akaụntụ email. Nke a nwere ike ịbụ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ dabere na Adreesị IP 'aha:
Enweghị aha ọma IP - Izipu nnukwu email nke e-mail ọhụrụ na Adreesị IP ọhụrụ na-enweghị aha nwere ike ime ka ozi-e gị gbochie, gafere na folda junk… ma ọ bụ nweta Adreesị IP gị ozugbo ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-akọ email dị ka SPAM.
Ekekọrịta IP suna - Aha nnabata IP Adreesị abụghị ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ị bụghị nnukwu onye na-ezipụ email ma debanye aha na akaụntụ na onye na-eweta ọrụ email a ma ama, ha ga-agwakọta ozi ịntanetị gị na ndị ọzọ na-ezigara ndị ozi ọma iji hụ na ezitere email gị nke ọma. N'ezie, ị nwekwara ike ịbanye na nsogbu site na ọrụ na-enweghị aha ọma nke na-ekwe ka SPAMMER ziga n'otu Adreesị IP ahụ.
Raara onwe ya nye IP aha - Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu onye na-ezipụ email… nke bụ ndị debanyere aha 100,000 kwa ozi, Adreesị IP raara onwe ya nye kachasị mma iji hụ na ị nwere ike ijigide aha gị. Otú ọ dị, Adreesị IP chọrọ okpomoku… Usoro ị na-eziga ndị na-enye ọrụ specificntanetị akọwapụtara otu olu nke ndị debanyere aha gị maka oge iji gosi na ISP na ị nwere aha ọma.
Kedu ka ị si agba mbọ iji nweta nnabata IP siri ike?
Enwere ihe dịgasị iche iche ma a bịa na ịchọpụta na idobe aha IP gị. Na-ekwe ka ndị ahịa wepu aha gị n’ozi ịntanetị ma ọ bụrụ na ha chọrọ bụ otu ihe ị ga - eme; nke a ga - ebelata mkpesa spam banyere ozi ịntanetị gị. Lezienụ anya na ọtụtụ ozi ịntanetị ị na-eziga na ugboro ole ị na-ezigakwa ha - izipu ọtụtụ n'ime ngwa ngwa nwere ike imebi aha IP gị.
Nzọụkwụ ọzọ bara uru bụ nyochaa njirimara email gị site na iji usoro ịpụpụ ma ọ bụ wepụ adreesị ozi-e nke na-agbagha na listi nzipu ozi gị. Scoredị akara gị ga-agbanwe oge niile, mana ịme ihe ndị a ga-enyere ya aka ịnọ ike dị ka o kwere mee.
Kedu ka ị si mepụta aha siri ike nke onye na-ezipụ ọhụụ?
Ma ị na-eziga nnukwu ozi site na ihe nkesa ozi nke gị, ma ọ bụ debanye aha maka onye na-eweta ọrụ Email ọhụrụ, IP Warming bụ usoro nke ịkwesịrị ịmepụta mbụ, aha siri ike maka adreesị IP gị.
Gụkwuo Banyere Okpomoku IP
Ngwaọrụ iji lelee Aha IP
Dị iche iche software dị ugbu a na-enye gị ohere mfe lelee gị IP aha; ị nwere ike ịchọta nke a bara uru n'ihu mkpọsa ahịa ahịa. Softwarefọdụ sọftụwia nwekwara ike inye nduzi maka ụzọ iji melite akara onye na-ezipụ gị ka ị na-aga n'ihu. Ndia bu ole na ole iji bido:
Zigara - Ndaba SenderScore bụ ụfọdụ nke aha gị, gbakọọ site na 0 ruo 100. Ọ bụrụ na akara gị dị elu, ọ ga - aka mma ka ị nwee aha ọma, yana ọ ga - eme ka ịnweta email gị na igbe mbata karịa folda nchekwa. A na-agbakọ SenderScore na ntanetị ụbọchị 30 ma na-agbatị adreesị IP gị megide adreesị IP ndị ọzọ.
Etiti - Barracuda Netwọk na-enye ma ihe IP na ngalaba aha nyocha site na Sistemụ Barracuda ha; a ezigbo oge nchekwa data nke adreesị IP na ogbenye or mma nkwupụta.
Tụkwasịrị Obi - nke McAfee na-agba ọsọ, TrustedSource na-enye ozi na email email gị na aha weebụ.
Ngwaọrụ Google Postmaster - Google nyere ya Postmaster Ngwaọrụ ndị na-ezigara gị ka ị soro data na oke olu gị na-eziga na Gmail. Ha na-enye ozi gụnyere aha IP, aha ngalaba, Gmail ezigara njehie, na ndị ọzọ.
Microsoft SNDS - Yiri Google si Postmaster Ngwaọrụ, Microsoft na-enye ọrụ a na-akpọ Ọrụ Smart Network data (SDNS). Otu n'ime data nke SNDS nyere bụ nghọta n'ime isi data dị ka izipu aha IP gị, ọnyà ọnyà Microsoft ole ị na-ebuga na ọnụọgụ mkpesa gị.
Senderbase nke Cisco - Real oge iyi egwu data na IP, ngalaba, ma ọ bụ netwọk iji chọpụta SPAM na obi email na-eziga.
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọzọ na aha IP ma ọ bụ nnweta email gị, kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ.
Tags: netwọkụ barracudaonye na-enye ọrụ emailespgoogle postmaster ngwaọrụntinye igbeonye na-ahụ maka ịntanetịadreesị IPAdreesị IPAdreesị IP adreesịaha ọma ipip akaraispziri ozitụkwasị obiezi